- डा. खेम कार्की
विवाह एउटा प्रक्रिया हो जसका माध्यमबाट दुई व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धलाई सार्वजनिक, औपचारिक र स्थायी बनाउँछन् । कानूनी तथा सामाजिक मुल्य मान्यता बमोजिम दुई फरक लिङ्गका व्यक्तिबीचमा सम्बन्ध स्थापित गरी घरबार बसाउनु नै विवाह हो । तर आजकल समलिङ्गी विवाह पनि हुने गरेको छ । यसलाई सामान्य मान्नु पर्छ । विवाहको मूल तत्व भनेको घर बसाउनु हो र सन्तान उत्पादन गरी परिवार बनाउनु हो वा वंश बृद्धि गर्नु हो।
बालविवाह भनेको के हो ?
बालविवाह भनेको केटा वा केटी वा दुबैको उमेर १८ वर्ष पूरा नभई गरिने विवाह हो । नेपालको कानूनद्वारा निषेध गरिएकोले बालविवाह एउटा अपराध हुनुका साथै मानवअधिकारको हनन् समेत हो । नेपालमा अझै पनि बालविवाह चिन्ताजनक अवस्थामा छ ।
नेपालमा केटाको उमेर भन्दा सानो उमेरकी केटी बिहे गर्ने चलन अझै पनि पाईन्छ।यस्तो बिहेलाई अनमेल बिबाह पनि भनिन्छ ।
सानो उमेरमा हुने विवाहका दुष्परिणामहरूले विश्व आक्रान्त छ । विश्वको समग्र बिकासका दुई मुख्य बाधकहरूमा बालविवाह र ससस्त्र द्वन्द हुन् ।
विश्वमा हुने बालबिबाह
प्रति बर्ष =१५,०००,००० (एक करोड ५० लाख) जना
प्रति दिन = ३७,००० (३७ हजार) जना
प्रति घण्टा = १७०० (१७ सय) जना
प्रति मिनेट = २८ जना
प्रति सेकेन्ड = २ जना
विश्वको बालविवाहको दरको विस्तृत जानकारीको लागि यो लिंकमा हेर्नुहोस
विश्वको इतिहासमा नै सबै भन्दा बढी बालविवाह भएको र हुने जोखिम रहेको अवधि यहि हो ।
नेपाल जस्तो बिकासन्मुख मुलुकका३ कोशोरी मध्ये १ किशोरीको १८ बर्ष नपुग्दै विवाह भैसकेको हुन्छ । नेपालमा बाल बिबाहको दर घट्दै गएको भए पनि विश्वमा धरै बालबिबाह हुने देश मध्ये नेपाल २२औं मुलुक हो ।
दक्षिण एसिया मा लगभग २ जना किशोरीमा १ जनाको १८ वर्ष नपुग्दै बिहे हुन्छ। यो बिश्वमै सबै भन्दा धेरै विवाह हुने दर हो । यो क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै बंगलादेश (५२%), त्यसपछि भारत (४७%), नेपाल (३७%) र अफगानिस्तान (३३%) पर्दछन ।
सन् २०१४ मा केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग र युनिसेफले गरेको सर्वेक्षण अनुसार बालविवाह अर्थात् १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने विवाह दर ३७ % छ । करीब १०% किशोरीको १५ बर्ष नपुगी नै विहे हुन्छ­।